China High Quality AA Battery Box ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားနိုင်သည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤ AA ဘက်ထရီသေတ္တာသည် 6V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
AA ဓာတ်ခဲသေတ္တာ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
9V သံမှိုတပ်ထားသော AA ဓာတ်ခဲသေတ္တာသည် AA သာမန်ဓာတ်ခဲ (သို့) အားပြန်သွင်းနိုင်သောဓာတ်ခဲလေးလုံးကိုထိန်းနိုင်သည်။ သာမန်ဘက်ထရီများသည် 6V ဗို့အားကိုထုတ်နိုင်ပြီးပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သောဘက်ထရီများသည် SCM စနစ်၊ Arduino စနစ်၊ အခြားအသိဥာဏ်ရှိသောကားများ၊ ခြေရာခံကားများအတွက်သုံးနိုင်သည်။
KEYU အမှတ်တံဆိပ် AA ဓာတ်ခဲလေးလုံးပါ ၀ င်သည်သင် ၁၀၀% ကောင်းသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုသုံးပစ္စည်းများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
AA ဓာတ်ခဲသေတ္တာ၏ထုတ်ကုန် ၂. ကန့်သတ်ချက် (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
ထုတ်ကုန်အမည် 9V သံမှိုထည့်ထားသော AA ဓာတ်ခဲသေတ္တာ
ပစ္စည်း: PP + ကြေးဝါနီကယ်ချထားတဲ့
၃။ AA ဘက်ထရီသေတ္တာ၏ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်နှင့်အသုံးချမှု
၉. သံမှိုနှင်ပါသောဤ AA ဓာတ်ခဲသေတ္တာကို 6v ဘက်ထရီအထွက် (1.5v X4= 6v) ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
AA ဘက်ထရီသေတ္တာ၏ ၄ င်းကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 9V သံမှိုပါသော AA ဓာတ်ခဲသေတ္တာ
ပစ္စည်း: PP + Brass nickel plated
AA ဘက်ထရီသေတ္တာ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ် AA ဓာတ်ခဲသေတ္တာအားလုံး
၆။ AA ဓာတ်ခဲသေတ္တာ၏ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်း
၇။ AA ဘက်ထရီသေတ္တာ၏အမေးအဖြေများ
hot Tags:: AA ဘက်ထရီသေတ္တာ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက် ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်